စားတော်ပဲပြုတ်ရန်... ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
စားတော်ပဲ .......ဆန်ချင်ခွက် (၅) ခွက်
စားဆော်ဒါမှုန်. ......၁ ဇွန်း(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
ထန်းလျက်ခဲအသေး..၂ ခဲခန်.( သို.) သကြားညို အနည်းငယ်
ရှိသူများကတော့..Green peas , Yellow peas , Mellow peas ဆိုပြီး..
Ready To Use အထုပ်တွေကို ဂရမ်နဲ.ရနိူင်ပါတယ်..။
yellow peas က အခွံကျွတ်များပြီး..green peas ကတော့အခွံကျွတ်သက်သာစေပါတယ်..။
ပဲကို ရေဆေးပြီး တစ်ည ကြိုတင်ရေစိမ်ထားပါ ။
စား ဆော်ဒါမှုန်. ၃ ပုံ ၁ပုံကိုပါထည့်ပြီးစိမ်ထားပေးရပါမယ်...။
အညှောင့်ထွက်တာ ပုံမှန်လောက်ပဲဆိုရင်..နောက်တစ်ည အိပ် ပြီးပြုတ်လို.ရပါပြီ အညှောင့်ရှည်ရှည်ထွက်ချင်ရင်တော့..နောက်ထပ်၁ည ထပ်ထားပေးရပါမယ်။
ရေစိမ် ၁ည ၊ အညှောင့်ဖောက်၁ည (သို.) ရေစိမ်၁ည၊
အညှောင့်ဖောက် ၂ ည ဖြစ်ပါတယ်။
အညှောင့်ပေါက်နေတဲ့စားတော်ပဲထဲကို ဆီ ၊စား ဆော်ဒါမှုန်. ၊ ထန်းလျက်ခဲ(သို.)
ရေခမ်းလို.ပဲတွေကျက်ပြီး (၁၀) မိနစ်ခန်.လောက်မှ..အဖုံးကိုဖွင့်ပေးပါ။